iOS 9 inounza hutsva huzhinji uye pano isu tinokuudza kuti zviri sei | IPhone nhau
Louis weBoat | | iOS 9
Muna 2013 takagara iyo iOS 7 kuburitswa, shanduko hombe kune Apple's mobile operating system kubvira iyo yekutanga iPhone. Zvese paari zvaive zvitsva, zvirinani kana zvakaipa. Mufungo wekutanga waive wakanaka uye, kunyangwe hazvo isu tese tisina kufara zvachose pakutanga nehurongwa hwakataridzika, "zvayakanakira" zvakakurumidza kukunda "cons".
Zvisinei, kusvikira nhasi kune zvimwe zvinhu zvaive zvirinani muIOS 6. Chimwe chezvinhu izvi kuita zvakawanda. Vhura uye nekukurumidza tarisa kuti ndeapi mafomu atanga tavhura Zvaive zviri nyore pamberi pezvino uye uvhare iwo zvakanyanya. Ichokwadi kuti muIOS 7 uye 8 multitasking inonyanya kutaridzika kutaridzika, asi iko kuita kwaimbove nako kwave kurasika.
Munguva ino yaGunyana unotevera, iOS 9 ichaburitswa, iyo inounza neshanduko nyowani mukuita kwakawanda. Muzvinhu zvakakosha ichiri yakafanana chaizvo nezvataive nazvo mushanduro dzapfuura, nekuti isu tichafanirwa kuita Rova zvakasimba kuruboshwe uye kurudyi kufamba pakati pemapurogiramu akavhurwa uye kumusoro kana tichida kuivhara. Shanduko hombe inouya pakuonekwa, izvo zvino zvaratidzwa kwatiri mu nhevedzano yekufukidza, semasiraidhi, ayo anoita kuti kuvhara mashandisiro kuve nyore uye nekukurumidza (kuchinjisa pakuvhara kunowedzera kushanda zvakare).
Iyi ndeimwe ye shanduko diki dzinounzwa neIOS 9 uye kuti, kunyangwe isiri iyo inonyanya kukosha, ndechimwe chinhu chichava chiripo muhupenyu hwedu hwezuva nezuva uye hwatichacherekedza patinotamira kune itsva yekushandisa system kekutanga. Uye kwauri, ndeipi vhezheni ye multitasking yaunonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Yakaita sei multitasking nyowani yeIOS 9
Iwe unofanirwa kudzidza chimwe chinhu: Kana maviri kana anopfuura maitiro asingashande panguva imwe chete, IZVI HAZVI CHOKWADI MULTITASK.
Jay ruiz .. Unoreva kopi ipi? Iwe unozvitaura zvinoonekwa kana nekuti multitask yakagadzirwa neimwe yevaviri.
IOS 7 inoita kunge iri nani kwandiri, munzira dzese, kupfuura iOS 6, uye nekukurumidza zvakanyanya. Iye zvino unogona kuona zvawakavhura mukushandisa uye hazvidi kuti zvirambe zvakatsikirirwa uye kumirira kuti ugone kuzvivhara ...
MuIOS 9 multitasking inoshanda zvakanyanya zvakanyanya kupfuura muIOS 8, kubva pakuona kwangu.
Ini handizive kuti nei Apple ichiita kuti zvinhu zviome kudaro, sei vasingarambe vachiongorora cydia tweaks ye multitasking, paine akawanda, ari nani uye anodakadza
Ini handizive kuti nei Apple ichiita zvinhu zvakaoma kudaro, sei vasingarambe vachiongorora cydia tweaks ye multitasking, paine akawanda, ari nani uye ane mavara
Na Mwari, uye saka ivo vanoti iro apuro nderepakutanga chaizvo? Iyo Android multitasker asi yakatwasuka.
Vhidhiyo Ongororo: Isu tinoisa kuramba kweLifeProof pakuyedza neyedu iPhone 6 Plus